Ogologo Ogologo - Nwepu Video
Nbudata vidiyo DJ na ụdị nke logo Universal. A mara mma, ntụrụndụ ngosi na-echeghachi na aha aha DJ na ederede omenala gị. Nke a DJ video ga-ejide ha ntị. Nnukwu dị ka DJ intro na mmalite ma ọ bụ setịpụ gị, iji mechibido abalị ma ọ bụ na-ekpo ọkụ, dị nnọọ n'etiti. Dị ka ụdị DJ anyị niile na vidiyo DJ bụ nke a na-ahaziri, nke dị elu, nke dị elu. Tinye ụdị omenala nwoke ma ọ bụ nwanyị na-ekwupụta akụkụ nke vidiyo maka naanị $ 50.
Nbudata vidiyo DJ na ụdị nke logo Universal. A mara mma, ntụrụndụ ngosi na-echeghachi na aha aha DJ na ederede omenala gị. Nke a DJ video ga-ejide ha ntị. Nnukwu dị ka DJ intro na mmalite ma ọ bụ setịpụ gị, iji mechibido abalị ma ọ bụ na-ekpo ọkụ, dị nnọọ n'etiti. Dị ka ụdị DJ anyị niile na vidiyo DJ bụ nke a na-ahaziri, nke dị elu, nke dị elu. Tinye ụdị omenala nwoke ma ọ bụ nwanyị na-ekwupụta akụkụ nke vidiyo maka naanị $ 50